Kekọrịta Ndahie M (na Ọganiihu M?) | Martech Zone
Okpu okpu na- Egwu McGee ebe m hụrụ vidiyo ọdịda. Daalụ maka egwu nke a post!
Ọ dị obere ka m na-ezute onye nwere ihe ịga nke ọma nke na-enwebeghị ọdịda dị egwu n'azụ ha. Kemgbe ọtụtụ afọ, amụtala m ịtụlee ihe ịga nke ọma m nwere karịa ọtụtụ. Enwere m ihe ịga nke ọma n'ihi na enwere m ụmụaka 2 mara mma nke m na-anya isi nke ukwuu na ndị na-egosipụtakarị ikike karịrị nke m rụzuru na ọkara nke afọ m.
N'ileghachi anya azụ na ndụ m, ekwenyere m na ihe ịga nke ọma m sitere na mmejọ m - na-agbanyeghị ha. Enwere m akụkọ mara mma mara mma ma mee ọtụtụ mkpebi adịghị mma, mana ọ bụ ihe dịka afọ 5 gara aga ka m kwụsịrị itinye uche na ịnwa imeziwanye ihe m bụ ọjọọ na wee malite ịchọpụta ihe m bụ nnukwu na. Amalitere m ibiri onwe m gburugburu na ndị na-ekpe m ikpe maka ma nyere m aka ịkpụzi nkà m karịa ịkatọ adịghị ike m.
Na mbilite m, anọ m bufee site na ulo akwukwo nke di elu, onye nwere ikike n'agha ndi agha US, gbara alukwaghim, malite ulo oru abuo, tufuru ulo ma megharia umu m (ugbo abuo). N'aka nke ọzọ, enwere m akara ugo mmụta dị elu na kọleji, bụrụ onye Gulf War Vet mara mma ma nwee nkwanye ùgwù, ọ bụ ọrụ maka ịmalite ọtụtụ azụmaahịa na-aga nke ọma, enwere aka na-ere ụlọ ọrụ na mba ụwa, ma nwee ụlọ nchekwa dị ka otu nna nwere ụmụaka 2 na-akwụwa aka ọtọ ma na-arụsi ọrụ ike.
Enwere m obi ụtọ ugbu a iji nyere aka na-agba ọsọ ụlọ ọrụ na-eto eto nke m nyere aka wulite atụmatụ azụmaahịa mbụ. Aka m abaghị ọgaranya, achọghịkwa m ịma otú m dị. Ezinụlọ m ka bi n’otu ụlọ. Ego ọ bụla m hapụrụ n’ụbọchị nkwụ ụgwọ ọbụla ga-aga ụlọ akwụkwọ nwa m nwoke ma ọ bụ tinye ya n’ọrụ ọhụrụ. Ọ bụrụhaala na enwere m ezinụlọ nwere obi ụtọ na ụlọ n'elu isi m, abụ m onye obi ụtọ!
Ọ bụrụ na ị jụọ m otu ihe omume kachasị ukwuu gbanwere ndụ m, enwere m abụọ:
Alụkwaghịm m. Abụ m nna na-ahụ n'anya mana egosighi m ya ruo mgbe m chere na enwere m ike ịhapụ ụmụ m. Alụkwaghịm m gbara mere ka ndụ m dị ka ihe kwesịrị ekwesị.
Apụrụ m arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ. Mgbe m wusịrị ego na otu ụlọ ọrụ dị na chaatị ahụ, etinye m n'okpuru njikwa ọhụrụ nke chere na m bụ ihe iyi egwu ma ewepụta m n'ọnụ ụzọ. Alaghachiri m n'ụlọ, nọdụ n'ihe ndina ya, wee kpọọ enyi m Darren Gray na Pat Coyle.
Pat mere ka m rụọ ọrụ ozugbo, echebeghịkwa m azụ. M gbanwekwara àgwà m banyere onwe m na uru m bara n'ịzụ ahịa. Ọ dịghị mgbe m ọrụ ọzọ, ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ga-eme ka ndụ m baa ọgaranya ka m na-arụ ọrụ iji mee ka nke ha baa ọgaranya.
Ndụmọdụ m nyere onye ọ bụla na-eto eto bụ na ka oge na-aga ị chọpụta ihe ike gị bụ na otu ị ga-esi zere ọnọdụ ma ọ bụ ohere ndị na-enweghị isi na ha, oge na-adịghị anya ị ga-ahụ obi ụtọ. Inwe obi uto na-aga nke oma.
Tags: okpuọdịda videoVidio Ahịaịga nke ọma
Nov 9, 2008 na 4:32 ehihie
I chefuru ikwu na ị dị oke egwu na-akpali ndị ọzọ. Nke a, n'anya m, bụ akụ na ụba mara mma, n'ihi na ọ nweghị onye nwere ike ịnapụ gị ya na ohi, ọ nweghị onye mbibi nwere ike gbazee ya ma ọ bụ gbapụta ya dị ka afụ ...
Nnukwu post! Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta.
Nov 9, 2008 na 4:36 ehihie
Daalụ Otir, ị bụ ezigbo mmadụ dị ịtụnanya.
Nov 9, 2008 na 5:12 ehihie
Nke kacha mma post,
M na-echeta nke ọma mgbe m na-eto eto a gwara m na m pụrụ ime ihe ọ bụla m tinyere n’obi ná ndụ. Na mgbe onye ọ bụla gbara m gburugburu bụ ihe ziri ezi na agbamume; ọ dịghị onye nwere ike inye aka na-eduzi m ma nye m ntụziaka maka otu m ga-esi gbanwee ike m n'ahịa ahịa na otu esi ezere ọnọdụ adịghị ike.
Dị ka nwata; Abụ m onye introvert na ruo taa a na m achọta ịkparịta ụka n'Ịntanet na ime mmekọrịta dị mkpa maka ọrụ m bụ ihe ịma aka.
N’ileghachi anya azụ na ndụ m; Echeghị m na enweela m ọtụtụ ọdịda dị egwu n'ihi na enwebeghị m nnukwu ohere ọ bụla nwere ike ịkpata nnukwu ihe ịga nke ọma.
Doug, daalụ maka inye m ọtụtụ ihe ka m chee echiche.
Nov 10, 2008 na 8:44 ehihie
Scott, ị dị mma! Ị bụ onye nwere nkà dị ịtụnanya - ekwela ka ihe ọ bụla kwụsị gị.
Nov 10, 2008 na 8:09 ehihie
Kemgbe mbụ m zutere gị, ị na-eje ozi dị ka ihe mkpali nye m mgbe niile na buru ụzọ bụrụ m n'enweghị mgbagha. Eji m n’aka na e nwere ọtụtụ ndị ga-eso m n’ime ya.
Na, otu mgbede n'isi ụtụtụ, daalụ maka ọrụ gị na obodo anyị!
Nov 10, 2008 na 8:45 ehihie
Daalụ Julie nke ukwuu! Ọrụ m bụ obere achịcha atụnyere Vets anyị n'oge a.
Nov 11, 2008 na 8:54 ehihie
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ị chọpụtara site na “ọnwụnwa site n'ọkụ” na iji ike mmadụ na-eme ihe bụ opekata mpe otu igodo na-enye obi ụtọ.
Ndị ọkà mmụta sayensị abịawo ná nkwubi okwu yiri nke ahụ. Ị nwere ike ịhụ usoro vidiyo na akụkọ gbasara echiche a nke "obi ụtọ" Ebe a.